FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SCOTTISH TERRIER - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika Scottish Terrier
Poochini the Scottish Terrier— 'Ny anarany voasoratra anarana AKC dia Gryffindor Poochini Gurvey antsoinay hoe Poochini.'
Lisitry ny alika mitambatra teratany Scottish Terrier
Ny Scottish Terrier dia alika kely matanjaka ary fohy ny tongony amin'ny fomba fikarakarany ary mety hahatonga azy ho fohy kokoa aza. Ny loha dia mifanaraka amin'ny ambin'ny alika sisa. Ny karandohany dia lava, somary domed ary medium ny sakany. Kely ny maso miendrika amandy ary milamina tsara. Ny sofina mijoro tsara sy maranitra dia voatsindrona totohondry ary apetraka tsara eo an-doha. Mitovy halava amin'ny karandoha misy fijanonana kely ny vava, ary mihidy kely amin'ny orona. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Ny topline any aoriana dia avo lenta. Ny rambony dia matevina kokoa eo am-potony, salantsalany ny halavany ary rakotra volo fohy sy mafy, entina mahitsy na somary miforitra. Ny tongony eo aloha dia lehibe kokoa noho ny tongony aoriana ary miendrika boribory. Dewclaws azo esorina. Ny palitao matevina, mazava ho azy, dia sarotra toy ny volom-borona miaraka amin'ny akanjo malefaka sy miaro. Ny palitao dia manana mombamomba miavaka miaraka amin'ny volo lava kokoa amin'ny volombava, volomaso, tongotra ary tapany ambany amin'ny vatana. Ny loko dia avy amin'ny loko mainty na potetra na brindle. Mety misy fotsy kely eo amin'ny tratra.
Sahy sy mailaka i Scottie ary mafy fo sy be fitiavana. Mahafinaritra sy feno toetra izy io. Milalao sy sariaka amin'ny alàlan'ny alika kely, dia lasa olon-dehibe mihaja izy. Ny Scottish Terrier dia manao mpiambina tena tsara. Mirona mafy loha anefa izy io ary mila hentitra, saingy ny fikirakirana malefaka hatramin'ny fahazazany dia hanapaka ny ao an-trano. Mifandraisa tsara . Ity karazana ity dia marefo amin'ny fanitsiana, noho izany raha hentitra ianao ary matoky tena dia tokony hamaly anao ny alika. Na izany aza, raha tsy milaza izany ianao rehefa miteny aminy hoe: tsia, dia ho fantany izany ary tsy hihaino izy. Ny fiofanana momba ny fankatoavana dia tsy maintsy atao mifanaraka nefa maharesy lahatra. Aza mikapoka alika mihitsy ary aza milalao lalao mahery setra amin'ny tertera toa an'i Scottie, toy ny tolona sy ady tototra. Vitany fanamby ny olona ao amin'ny fianakaviana izay tsy nametraka mpitarika aminy. Fiainana, rehareha ary mahira-tsaina, manana toetra azo itokisana i Scottie. Tia mihady, mankafy mandeha , tia milalao lalao baolina, ary sportif tanteraka, tia trano ary mahaleo tena. Izy io dia nofaritana ho toy ny alika afaka mandeha na aiza na aiza ary manao na inona na inona - alika lehibe ao amin'ny vatan'ny alika kely. Tena mora tohina amin'ny fitsikerana sy ny fiderana ary noho izany tokony hampiofanana moramora. Ireo alika ireo dia manao biby fiompy ao an-trano. Aza avela hivoatra ity alika ity Syndrome kely alika , fitondran-tena ateraky ny olombelona izay inoan'ny alika fa izy dia mpitarika ho an'ny olombelona. Izany dia hiteraka degre isan-karazany olan'ny fitondran-tena ao anatin'izany, saingy tsy voafetra ho, ny ho tezitra, snappish, mafy loha, miaro ary mibontsina be. Tsy toetra Scottie ireo, fa toetra naterin'ny fomba mitsabo ny alika ny olombelona . Mila ampianarina ny ankizy amin'ny fampisehoana fahaiza-mitarika amin'ny alika na ny alika dia tsy ho tsara amin'izy ireo. Matetika izy ireo dia tsy atolotra ho an'ny trano misy ankizy kely kokoa satria ny ankamaroan'ny tompona dia tsy mampiseho fahefana ampy azy ireo, ary alika ny trano. Ny fihetsika ratsy rehetra dia azo averina raha miova ny fomba fifampiraharahana amin'ny alika. Ny alika dia mila mahafantatra tsara ny fitsipiky ny trano. Mila ny mpianakavy rehetra izy ireo mba ho hentitra, hatoky tena ary tsy hivadika amin'ny fomba fanao. Ny alika dia mila omena a fitsangatsanganana entana isan'andro hanamafisana ny fitarihana ary handoro hery ara-tsaina sy ara-batana.
alika shar pei mifangaro pitbull
Lanja: 19 - 23 pounds (8½ - 10½ kg)
Ny sasany dia mora voan'ny Scottie Cramp (olan'ny hetsika), ny aretin'i Von Willebrand, ny allergy parasy, ny olana amin'ny hoditra ary ny valanoranony. Whelpers sarotra ireto alika ireto. Mora amin'ny fivontosan'ny sela .
Ity alika ity dia tsara amin'ny trano ipetrahana. Mavitrika ao an-trano izy io ary tsy haninona raha tsy misy tokontany. Aleo ny toetrandro mangatsiaka.
Alika kely mavitrika ireto izay mila a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazany rehetra, ny lalao dia tsy hahatanteraka ny toetrany voalohany handeha. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotanin-trano mimanda.
Alika kely yorkie 4 volana
Ny fanosehana matetika ny palitao mahery, dia ilaina ary fitandremana fanampiny rehefa alatsaka ny alika. Mandrosoa na shampooing maina raha ilaina. Ny alika dia tokony hohaingoina asaina indroa isan-taona. Ny volo amin'ny vatana dia avela lava, toy ny zipo, fa ny volo kosa amin'ny tarehy voaravaka kely ary kosehina mankany aloha. Ity karazana ity dia mandena kely tsy misy volo.
Ny Scottish Terrier dia novolavolaina tany Ekosy tamin'ny taona 1700. Ny karazany dia nantsoina voalohany hoe Aberdeen Terrier, taorian'ny tanànan'ny Scottish, Aberdeen. George, Earl fahefatra an'i Dumbarton dia nanonona ny anaran'ny alika hoe 'diehard kely' tamin'ny taonjato faha-19. Tamin'ny taona 1890 no tonga voalohany tany Etazonia i Scotties. Scotties dia nampiasaina hihaza biby den, toy ny bitro, otter, amboahaolo ary badger. Ny tertera Scottish dia neken'ny AKC tamin'ny 1885.
Scottish Terriers - Koka sy Kluska (reny sy zanaka vavy)
Kluska, tompon-daka Scottish Terrier Champion, 3 taona tany Polonina (International Dog Show - Szczecin 18.06.2005)
inona no miteraka ny omby ho terrier
Magnolia the Scottish Terrier amin'ny 2 1/2 taona
'Ity no Bonnie Mae malalako. Scottie 8 taona izy. Manana toetra mahafinaritra be izy ary tia milalao baolina ary mazava ho azy nokosehina ny kibony. Ny fanamafisany dia tonga lafatra arakaraka ny karazany ary ny olon-drehetra dia tia ny toetrany fisty. Ity sary ity dia nalaiko teo alohanay. Bonnie Mae dia tia miresaka mandeha lavitra miaraka amiko imbetsaka isan'andro. Nianatra tany amin'ny sekoly fankatoavana izy ary nahazo diplaoma tamim-boninahitra. Rehefa eo akaikin'ny alika hafa izy dia tia mirehareha ary misehoseho. Mangina fotsiny izy, ny fitiavako ny fiainako! '
Alika kely Scottie amin'ny 8 herinandro
'Salama, Honey no anarako. Terrain Skotika fotsy aho ary avy any Peroa. Eo ankavanana dia izaho fony mbola zaza. ' Sary natolotry ny The peroviana skotsa
Ity i Trevor, Baxter ary Tina avy any amin'ny firenena tsara tarehy any Peroa. Sary natolotry ny Ther Peroviana Scotties
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ilay tertera Scottish
Sary Scottish Terrier 1
Sary Scottish Terrier 2
Alika Scottish Terrier: sary an-tsokosoko voaangona
amerikana pit bull terrier boxer mix
sary alika zanak'alika amerikana omby
sarin'i shih tzu pomeranian mix
schipperke afangaro alika kely amidy